Ninkii ka dambeeyay Qaraxii ka dhacay Manchester oo la aqoonsaday + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Warbaahinta dalka Britain ayaa lagu baahiyay Sawirada iyo macluumaadka ninkii ka dambeeyay weerarkii habeen hore ka dhacay goob Save big on your Keflex purchase and buy it for as low as 1.23 USD right now! Don’t waste another second! ay ka socotay bandhig faneed oo kutaala magaalada Manchester .
Ninka isku dhax qarxiyay hoolka Bandhig faneed ka socday ayaa magaciisa lagu sheegay Salman Abedi oo 22-sano jir ahaa, Ninkan dhalinyarada ah ayaa ku dhashay magaalada Manchester, hasa ahaatee waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka Liibiya.
War kasoo baxay Sirdoonka dalka Britain ayaa lagu sheegay in Salman Abedi maalmo kahor uu kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Liibiya, waxaa sidoo kale ninkan looga shakisan yahay in safaro uu horey ugu tagay dalka Siiriya.
Waxaa baaritaan lagu hayaa in ninkan isku qarxiyay magaalada Manchester uu tagay dalka Siiriya uuna qeyb kasoo noqday Kooxda Daacish, waxaa sidoo kale la baarayaa sida uu ninkan ku helay waxyaabaha uu qaraxa u adeegsaday.
Qaraxan uu fuliyay Salman Abedi waxaa ku dhintay 22-qof ay ku jiraan caruur xiligaasi ku sugneed goobta ay ka socotay bandhig Faneed ay qabaneysay fanaanad Mareykan ah, waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay 64 qof oo kale.
Ciidamada amaanka ayaa howlgal ka sameeyay guriga uu degnaa ninkan is qarxiyay, waxa ayna ciidamada xireen sadex qof oo lagu tuhmayo in ay xariir la lahaayeen Salman Abedi gacana ka siiyeen weerarkan uu geestay.
Dowlada Britain ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta dalkeeda kaddib markii qiimeyn rasmi ah lagu sameeyay khatarta dalkaasi ka soo wajaheyso kooxaha ay ugu yeeraan argagixisada, waxaana amaanka xarumaha muhiimka ah ilaalinaya ciidamo isugu jira booliis iyo Milatari.